OPPO F19 Pro အချက်အလက်များ | OPPO မြန်မာ
Height: About 160.1mmWidth: About 73.2mmThickness: About 7.8mmWeight: About 172g * ကုန်ပစ္စည်း၏ အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်သည် စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ထုတ်လုပ်မှု အစဉ်နှင့် တိုင်းတာမှုများအပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း အမှန်တကယ်ထွက်ရှိလာချိန် ဖော်ပြချက်များကို အတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
8GB RAM + 128GB ROM*The actual RAM and ROM available will be less than the values above due to several factors. For example, it takes some RAM to run the OS and it takes some ROM to install the OS and some apps. RAM Type: LPDDR4X @ 1866MHz External Memory: Supported USB Version: USB 2.0 USB OTG: Supported* ဆော့ဝဲလ်များ ထည့်သွင်းနေရာယူမှုကြောင့် ရရှိနိုင်သော internal storage သည် အနည်းငယ်လျော့နည်းနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ရရှိမည့် မမ်မိုရီသိမ်းဆည်းနိုင်သောပမာဏသည် အက်ပလီကေးရှင်းများအား update ပြုလုပ်ခြင်း၊ အသုံးပြုသူ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အခြားသော သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ခြေရှိပါသည်။